အိုင်ဖုန်းပေါ်တွင်အင်တာနက်ကိုမရှိဘဲရေဒီယိုကိုနားထောင်ဖို့ကိုဘယ်လို - IOS အတွက် - 2019
သင့်ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုအသိအမှတ်ပြုပေးကြောင်းပုံရိပ်တွေ - တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသုံးစွဲသူများအကြားဆက်သွယ်ရေးနှင့်အပြန်အလှန်အဘို့အင်တာနက်အရင်းအမြစ်များ၏အမြောက်အများကိုယ်စားပြုပုံကိုထောက်ခံပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, အကိုယ်စားပြုပုံကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံများသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီကြေညာချက်ဟာလူမှုရေးကွန်ရက်များပိုမိုသက်ဆိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောမူပိုင်ပစ္စည်းများအောက်တွင်မှတ်ချက်များအတွက်ရိုးရှင်းစွာဖိုရမ်များနှင့်အဖြစ်က်ဘ်ဆိုက်များ, အများတို့သည်လည်းအသုံးပြုသူများအခြို့သောလမ်းအတွက်လုံးဝကြားနေသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်ပြီးပုံရိပ်တွေသူ့ဟာသူ install လုပ်ပါ။
ဖြစ်နိုင်သမျှ avatarku Draw နှင့်ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်နှင့်အတူ - သို့မဟုတ်ဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖန်တီးနေတဲ့သက်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံအယ်ဒီတာကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျပိုက်ကွန်အပေါ်ကိုရှာဖွေထုံးစံပုံရိပ်တွေ generate မှဖြေရှင်းချက်၏တစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်အမျိုးမျိုး - အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုများ၏ပုံစံ။ ရုံအဲဒီကိရိယာနောက်ထပ်ကျနော်တို့စဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 1: Gallerix
ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုသင်မျက်နှာ features တွေရရှိနိုင်ပါရွေးချယ်စရာများ၏များစွာ၏လက်တန်း identikit ရွေးချယ်ခြင်းတစ်ဦးကိုယ်ပွားကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီ tool ကျပန်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပေါင်းစပ်ပြီး, အသုံးပြုသူလွတ်လပ်စွာ image ကိုအပေါငျးတို့သအသေးစိတ်ကိုညှိအလိုအလျောက်ပုံရိပ်တစ်ခုထုတ်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပွားကိုစတင်ရန်, အပေါ်က link ကို click နှိပ်ပြီးအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးတပ်မက်လိုချင်သောအထပ် identikit ကိုရွေးပါ။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကို silhouette တင်ပြနှစ်ခု icon များထဲကတစ်ခုအပေါ်ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဆိုပါရရှိနိုင် tab ကိုအပေါ် Moving, မျက်နှာ, မျက်စိနှင့်ဆံပင်၏ parameters တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ လက်ျာဘက်အဝတ်နှင့်နောက်ခံပုံကိုရွေးချယ်ပါ။
image ကိုအောက်ကထိန်းချုပ်မှုကိုသင်ပုံထဲမှာအရာဝတ္ထု၏တည်နေရာနှင့်စကေးကို configure ခွင့်ပြုပါ။
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါကွန်ပျူတာထဲမှာပုံကို save လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိအဖြစ်ရုပ်ပုံတည်းဖြတ် "ဒေါင်းလုပ်" အောက်ခြေ menu bar ထဲက။
ထိုအခါ PNG-Boot တက်ပုံ၏တဦးတည်းကို select - 200 × 200 သို့မဟုတ် 400 × 400 pixels ကို၏ဆုံးဖြတ်ချက်မှာ။
ဤတွင် Gallerix ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပြီးလက်ရေးဆွဲကိုယ်စားပြုပုံကိုဖနျတီးဖို့ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းပါပဲ။ ရလဒ်အဖြစ်, သင်ဖိုရမ်များနှင့်အခြားအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ရယ်စရာ image ကိုရယူပါ။
Method ကို 2: FaceYourManga
ကာတွန်းကိုယ်စားပြုပုံကို generate မှမယုံနိုင်လောက်အောင်ပျော့ပြောင်းကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဤဝန်ဆောင်မှု၏ functionality, Gallerix နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုအသေးစိတ်အသုံးပြုသူ image ကိုထုတ်လုပ်ပြီးအပေါငျးတို့သ element တွေကိုထိန်းညှိဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒါကြောင့် Editor ကိုစာမကျြနှာသို့သွားကာဇာတ်ကောင်များအတွက်ဆန္ဒရှိကြမ်းပြင်ကိုရွေးပါ။
Next ကိုသင်တစ်ဦးကိုယ်ပွားထုတ်လုပ်ဖို့ interface ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုများစာရင်းကိုမြင်လိမ့်မည်။
အားလုံးအတော်လေးရိုးရှင်းပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းလည်းရှိပါတယ်။ အယ်ဒီတာ၏ညာဘက်အခြမ်းအပြင်အဆင်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအဘို့အမျိုးအစားရရှိနိုင်ပါသည် posted ကြောင့်သတိပြုသင့်ပါတယ်တွင်အလွန်များစွာကယ့်ကိုပါပဲ။ သင့်ရဲ့အကြိုက်မှမျက်နှာဇာတ်ကောင်များ၏အသေးစိတ်လေ့လာမှုအပြင်, သငျသညျလညျးမိမိဆံပင်နှင့်အဝတ်အစားများတစ်ဦးချင်းစီကို item ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ပုံပြုအားလုံးပြောင်းလဲမှုများ၏ရလဒ်အဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်အရာ - ဗဟိုအတွက်ကိုယ်ပွား၏အသွင်အပြင်နှင့်လက်ဝဲဘက်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အစိတ်အပိုင်း၏မူကွဲတွေအများကြီးနဲ့ panel ကရှိသေး၏။
သေချာကိုယ်ပွားနောက်ဆုံးတော့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ, သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်ကြောင့် Making ။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ «ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်» ထိပ်မှာညာဘက်။
ဒီမှာနောက်ဆုံးပုံရိပ်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ကျနော်တို့ site ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခံရဖို့ဒေတာကိုသတ်မှတ်ဖို့တောင်းနေကြသည်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့, သင့်ကိုမှန်ကန် e-mail လိပ်စာရိုက်ထည့်, အဲဒါကိုအပေါ်ကြောင့်, သင်ထားတဲ့ကိုယ်ပွားကို download လုပ်မယ့် link ကိုမေးလ်ပို့ပေးပါလိမ့်မည်။
ထို့နောက်အီးမေးလ်-box ကို Faceyourmanga ထံမှစာတစ်စောင်ကိုရှာဖွေ, သင်ဖန်တီးဓါတ်ပုံတွေကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်, မက်ဆေ့ခ်ျအတွက်ပထမဆုံး link ကို click လုပ်ပါ။
ရလဒ်အဖြစ် 180 × 180 ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူ PNG-ပုံရိပ်တွေသင့်ရဲ့ PC ကို၏မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့လိမ့်မည်။
Method ကို 3: Portrait ပုံဥပမာသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို
ဒီဝန်ဆောင်မှုကိုသင်အထက်ဖြေရှင်းနည်းများထက်ရိုးရှင်းတဲ့ကိုယ်စားပြုပုံကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အယူခံဖို့ဖြစ်ကောင်းအလွန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်နောက်ဆုံးပုံရိပ်တွေရဲ့ style ၏သို့သော်များစွာသောအသုံးပြုသူများသည်။
သငျသညျမှတျပုံတငျဖို့ဒီ tool ကိုစတင်သုံးစွဲဖို့မလိုပါ။ ရုံအပေါ်က link ကို click နှိပ်ပြီးနှင့်သင့်ကိုယ်ပွားကိုစတင်ပါ။
အနာဂတ်ကိုကိုယ်စားပြုပုံကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဒြပ်စင်စိတ်ကြိုက်စာမျက်နှာအယ်ဒီတာထိပ်ပေါ်တွင် panel ကိုအသုံးပြုပါ။
သို့မဟုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ «အပ်နှံ»အလိုအလျောက်ပုံရိပ် generate ရန်။
အပိုင်း « Image ကို Format ကို» အောက်ကတပ်မက်လိုချင်သောအချောပုံရိပ်ရဲ့အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါရန်။ ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ, သင့်ရဲ့ PC ပေါ်မှာကိုယ်စားပြုပုံကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် «ဒေါင်းလုပ်».
ရလဒ်အနေနဲ့အချော image ကိုချက်ချင်းသင်၏ကွန်ပျူတာ၏မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့လိမ့်မည်။
Method ကို 4: Pickaface
သငျသညျအမြားဆုံးစိတ်ကြိုက် userpic အကျင့်ကိုကျင့်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု Pickaface ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်။ ဒီဖြေရှင်းချက်၏အဓိကအားသာချက်သေချာပေါက်ခြစ်ရာကနေ "Sculpt" ပိုင်ဆိုင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သငျသညျပြဿနာများမရှိဘဲတပ်မက်လိုချင်သောအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည့်ထက်ပိုမို 550 စီမံကိန်းများနှင့်တင်းပလိတ်များမူပိုင်ခွင့်ကွက်လပ်, ရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။
သို့သော်ဒီ tool ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများအခွင့်ကောင်းယူပြီး, သင်ပထမဦးဆုံးမှတ်ပုံတင်ရန်ရှိသည်။
ဒီအဆုံး, ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ထိပ် menu ကို, ကလစ်ဖို့ «မှတ်ပုံတင်မည်».
အားလုံးလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုရိုက်ထည့်ပါ, အစာတန်းနှင့်အတူ check box ကိုစစ်ဆေး «ငါသည်အဖတ်ပြီးပါပြီနဲ့ကျွန်မစည်းကမ်းချက်များကိုလက်ခံ» ပြီးတော့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ «မှတ်ပုံတင်မည်».
သင်၌ logging ပြီးနောက်အသစ်တခု menu ကိုကို item ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ် - «နဲ Create ».
နောက်ဆုံးတော့ Pickaface အတွက်ကိုယ်စားပြုပုံကိုစတင်ရန်ကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
Flash ကို-based Interface ကိုအချိန်အတန်ကြာအယ်ဒီတာယူပါလိမ့်မယ်စတငျ။
ဒေါင်းလုဒ်၏အဆုံးမှာန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ အင်္ဂလိပ် - အထူးသအဆိုပြုထားနှစ်ခုရွေးချယ်စရာ၏ပထမဆုံးရွေးချယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။
ဇာတ်ကောင်များ၏အလိုရှိသောလိင်ကို Select လုပ်ပါ, အဲဒီနောက်သင်တစ်ဦးကိုယ်ပွားအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။
ချောတည်းဖြတ်ထားရှိခြင်း, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ «ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်».
အဲဒီလိုနှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ « Submit ».
ရုပ်ပုံထုတ်ပေးသည်အထိစောင့်ဆိုင်းပါ, အဲဒီနောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ «ကြည့်ရန်နဲ»သင်ရုံ userpic နေသူများကဖန်တီးသော download စာမျက်နှာတွင်သွားပါရန်။
ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးပုံအောက်မှာသင့်လျော်သော button ကို click - အခုတော့အားလုံးသင်ချော image ကို download လုပ်ပါရန်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဤရလဒ်သေချာဘို့သင့်ကိုစိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Pickaface နောက်သို့ကိုယ်စားပြုပုံထဲမှာ Created အမြဲတမ်းရောင်စုံဒီဇိုင်းနှင့်နှစ်သက်စတိုင်ပါရှိပါတယ်။
Method ကို 5: SP-စတူဒီယို
သင်ဝန်ဆောင်မှု SP-စတူဒီယို get အသုံးပြု userpic တစ်ခုမူရင်းကာတွန်းမနည်း။ ဒီ tool ကသင်ကာတွန်းစီးရီးရဲ့ style အတွက်ကိုယ်စားပြုပုံကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည် "တောင်ပိုင်း Park က".
ရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်ပုံရိပ်တစ်ခုနှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ပါဘူး site ပေါ်တွင် account တစ်ခုဖန်တီးရန်သင်မှန်ရှေ့စာမျက်နှာကနေစတင်နိုင်ပါသည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဧရိယာကို click ပါသို့မဟုတ်ဘက်မှာသက်ဆိုင်ရာတံဆိပ်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ရွေးချယ်ထားသောပစ္စည်းကို Adjust နှင့်ထိပ်မှာ navigation bar ကတည်းကအခြားပြောင်းရွှေ့။
သင့်ကွန်ပျူတာ၏မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာသိမ်းဆည်းဖို့, နောက်ဆုံးရုပ်ပုံသတ်မှတ်လျက်, floppy disk ကို icon ကို click လုပ်ပါ။
JPG format နဲ့ပုံရဲ့တိုတောင်းတဲ့အကျဉ်းချုပ်ပြီးနောက်သင့်ကွန်ပျူတာသို့ download လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: အုပ်စု VKontakte များအတွက်ကိုယ်စားပြုပုံကို Create
ဒါဟာအားလုံးန်ဆောင်မှုများရရှိနိုင်မယ့်သင်အွန်လိုင်းတစ်ခုကိုယ်ပွားဖန်တီးနိုင်သည့်နှင့်အတူ။ သို့သော်ဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးဖြေရှင်းချက်ယခုအချိန်တွင်ကွန်ယက်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထုံးစံ image ကိုဖန်တီးရန်သူတို့ထဲကတဦးတည်းယူကြသည်မဟုတ်လော